I-akhawunti yeSucrose ye-65-70% yemveliso yeswekile yehlabathi. Inkqubo yemveliso ifuna umphunga nombane omninzi, kwaye ivelisa intsalela kumanqanaba ahlukeneyo emveliso e kwangelo xesha.
Imeko yeSucrose yeMveliso kwiLizwe
Kukho amazwe angaphezu kwekhulu kwihlabathi liphela avelisa i-sucrose. IBrazil, i-India, iThailand kunye ne-Australia ngawona mazwe avelisa kakhulu kwaye athumela iswekile kumazwe angaphandle. Imveliso yeswekile eveliswa ngala mazwe ixabisa malunga neepesenti ezingama-46 zokukhutshwa kwehlabathi kunye nenani elipheleleyo leswekile esithunyelwa kwamanye amazwe malunga neepesenti ezingama-80 zokuthunyelwa kwelinye ilizwe. Imveliso yeswekile yaseBrazil kunye nenqanaba lokuthumela kwelinye ilizwe kuqala emhlabeni, ukubalwa kwe-22% ye-sucrose yemveliso yonyaka iyonke kunye ne-60% yokuthumela ngaphandle jikelele.
Iswekile / iimveliso zeswekile kunye neemveliso
Kwinkqubo yokulungisa umoba, ngaphandle kweemveliso eziphambili ezinje ngeswekile emhlophe kunye noshukela omdaka, zintathu iimveliso eziphambili: iswekile bagasse, ucinezelo lodaka, kunye ne-blackstrap molasses.
◇Izele leswekile Bagasse:
IBagasse yintsalela enemicu evela kummoba emva kokukhupha incindi yommoba. Iswekile bagasse ingasetyenziswa kakuhle kwimveliso yezichumiso eziphilayo. Nangona kunjalo, kuba i-bagasse iphantse yayinyulu yeselulosi kwaye iqulethe phantse zonke izakhamzimba ayisiyiyo isichumiso esisebenzayo, ukongezwa kwezinye izondlo kubalulekile, ngakumbi izinto ze-nitrogen, ezifana nezinto eziluhlaza, ubulongwe beenkomo, umgquba wehagu njlnjl. ibolile.
◇Iswekile yeendaba yoPapasho lweSwekile:
Cinezela udaka, intsalela enkulu yemveliso yeswekile, intsalela evela kunyango lwencindi yommoba ngokusefa, ukubala i-2% yobunzima beswekile ecoliweyo. Ikwabizwa ngokuba ludaka lokucoca ulwelo lommoba, udaka lokushicilela iswekile, udaka lokucoca ulushukela, ikhekhe lokucoca ummoba, udaka lokucoca ummoba.
Icebo lokucoca ulwelo (udaka) lubangela ungcoliseko olubonakalayo, kwaye kwimizi-mveliso emininzi yeswekile ithathwa njengenkunkuma, ibangela iingxaki kulawulo kunye nokulahlwa kokugqibela. Ungcolisa umoya kunye namanzi angaphantsi komhlaba ukuba ufumba udaka lokucoca ulusu ngokungacwangciswanga. Ke ngoko, ucinezelo lonyango lodaka ngumba ongxamisekileyo wokucocwa kweswekile kunye namasebe okhuselo lokusingqongileyo.
Ukusetyenziswa kokucoca udaka
Ngokwenyani, ngenxa yokuqulatha inani elininzi lezinto eziphilayo kunye neeminerali ezifunekayo kwisondlo sezityalo, ikhekhe lokucoca ulwelo sele lisetyenzisiwe njengesichumisi kumazwe aliqela, kubandakanya iBrazil, i-India, i-Australia, iCuba, iPakistan, iTaiwan, uMzantsi Afrika neArgentina. Isetyenziswe njengendawo epheleleyo okanye engena endaweni yezichumisi zezimbiwa kulimo lommoba, nasekulimeni ezinye izityalo.
Ixabiso lokucoca ulwelo lodaka njengesiChumisi
Umyinge wesivuno seswekile kunye nodaka lokucoca ulwelo (umxholo wamanzi angama-65%) umalunga ne-10: 3, oko kukuthi iitoni ezili-10 zesiphumo seswekile zinokuvelisa itoni enye yodaka lokucoca ulomileyo. Ngo-2015, imveliso yeswekile iyonke yi-0.172 yezigidigidi zeetoni, kunye neBrazil, i-India kunye ne China zimele i-75% yemveliso yehlabathi. Kuqikelelwa ukuba malunga ne-5.2 yezigidi zeetoni zodaka oluveliswayo eIndiya minyaka le.
Phambi kokwazi indlela yokujongana nokusingqongileyo ukulawula udaka lokucinezela okanye ukucofa ikeyiki, Makhe sibone ngakumbi malunga nokwakheka kwayo ukuze isisombululo esinokufunyanwa kungekudala.
Izinto ezibonakalayo kunye nokwenziwa kweekhemikhali zodaka lweendaba zeSwekile:
Izinto eziqinileyo zizonke
Izinto eziQinisekileyo eziQinisekisiweyo
UMZIMBA (iintsuku ezintlanu kwi-27 ° C)
Umcimbi wezinto eziphilayo
I-wax kunye namafutha
Ukubona ngentla, cofa udaka luqulathe ubungakanani obukhulu bezinto eziphilayo kunye nezimbiwa, ngaphandle kwe-20-25% yekhabhoni yomgubo. Udaka lokushicilela lukwacebile nge potassium, isodiyam kunye nefosforasi. Ngumthombo otyebileyo we-phosphorus kunye nezinto eziphilayo kwaye unomxholo omkhulu wokufuma, okwenza ukuba ube sisichumiso esibalulekileyo somgquba! Ukusetyenziswa kwesiqhelo kukuchumisa, kuzo zombini iifom ezingacwangciswanga kunye nezenziweyo. Iinkqubo ezisetyenziselwa ukuphucula ixabiso lesichumiso
kubandakanya ukufaka umgquba, unyango ngee-microorganisms kunye nokudibanisa ne-distillery effluents
I-Molasses yimveliso ehlukaniswe ne-'C 'kwibakala leswekile ngexesha lokugungxulwa kweekristale zeswekile. Isivuno se-molasses ngetoni nganye yekhara sikuluhlu lwe-4 ukuya kwi-4.5%. Kuthunyelwa ngaphandle komzi mveliso njengemveliso yenkunkuma.
Nangona kunjalo, i-molasses ngumthombo olungileyo, okhawulezayo wamandla kwiintlobo ezahlukeneyo zeentsholongwane kunye nobomi bomhlaba kwimfumba yomgquba okanye umhlaba. I-Molasses ine-27: 1 ikhabhoni kwi-nitrogen ration kwaye iqulethe malunga ne-21% ye-carbon enyibilikayo. Ngamanye amaxesha isetyenziselwa ukubhaka okanye ukuvelisa i-ethanol, njengesithako ekutyeni kweenkomo, kunye nesichumisi "esisekwe kwimolasses".
Ipesenti yezondlo ezikhoyo kwiMolasses
Iswekile kunye neFructose
Calcium kunye nePotassium
Imixube engekho iswekile
Icebo lokucoca ulwelo lokucoca kunye neMolasses Inkqubo yokuChumisa isichumisi
Okokuqala udaka lokushicilela iswekile (87.8%), izinto zekhabhoni (9.5%) ezinje ngomgubo wengca, umgubo womququ, intsholongwane, ingqolowa yengqolowa, umququ, isarusi njl njl, imolasses (0.5%), isuperosphate enye (2.0%), isalfure yodaka (0.2%), yayixutywe kakuhle yaza yafumba malunga ne-20m ubude ngaphezulu komgangatho womhlaba, i-2.3-2.5m ububanzi kunye ne-5.6m ukuphakama kwimilo enesangqa. (iingcebiso: ububanzi bokuphakama kweefestile kufuneka zihambelane idatha yeparameter yokujika komgquba oyisebenzisayo)
Ezi mfumba zinikwe ixesha lokuba zidityaniswe kwaye zigqibe inkqubo yokwetyisa malunga neentsuku ezili-14 ukuya kwezi-21. Ngexesha lokufumba, umxube wawuxutyiwe, wajika wanyanjiswa emva kweentsuku ezintathu ukugcina ukufuma kungama-50-60%. Ukujika komgquba kwakusetyenziselwa ukuguqula inkqubo ukugcina ukufana kunye nokuxubeka kakuhle. (iingcebiso: umjikelo wewindows ujike ujikeleze isichumisi somxube kwaye uguqule umgquba ngokukhawuleza, usebenze ngokufanelekileyo kwaye uyimfuneko kumgca wokuvelisa isichumiso somgquba)
Ukuba ukufuma kuphezulu kakhulu, ixesha lokuvumba liyandiswa. Umxholo wamanzi asezantsi eludakeni unokubangela ukubila okungagqibekanga. Ugqiba njani ukuba umgquba uvuthiwe? Umgquba oqolileyo ubonakaliswa yimilo evulekileyo, umbala ongwevu (otyheliweyo ukuya kwi-taupe) kwaye akukho vumba. Kukho ubushushu obungaguquguqukiyo phakathi komgquba kunye nendawo eziyingqongileyo. Ukufuma komgquba kungaphantsi kwe 20%.
Izinto ezifakiweyo zithunyelwa kwi Isichumisi esitsha sesichumisi ukuyilwa granules.
◇Ukuqwayita / Ukupholisa
Iigranules ziya kuthunyelwa kwi Umatshini wokumisa igubu ojikelezayo, apha imolasses (iipesenti ezi-0.5 zempahla eluhlaza) kunye namanzi kufuneka atshizwe ngaphambi kokungena kwisomisi. Isomisi segubhu esijikelezayo, esisebenzisa itekhnoloji ebonakalayo ukomisa iigranu, sisetyenziselwa ukwenza igranules kubushushu obungama-240-250 ℃ kunye nokunciphisa umxholo wokufuma ukuya kwi-10%.
Emva kwe-granulation yomgquba, ithunyelwa kuyo Umatshini wokujikeleza wesigubhu ojikelezayo. Ubungakanani bomyinge wesichumiso se-bio kufuneka sibe yi-5mm ubukhulu ukulungiselela umfama kunye negranule esemgangathweni. Ingaphezulu kunye neelensi ezingaphantsi ziyaphinda ziphinde zisetyenziswe kwakhona kwiyunithi yegranulation.
Imveliso yobungakanani obufunekayo ithunyelwa kuyo umatshini wokupakisha ngokuzenzekelayo, Apho ipakishwe ezingxoweni ngokugcwalisa okuzenzekelayo. Kwaye ekugqibeleni imveliso ithunyelwa kwindawo eyahlukeneyo iyathengiswa.
Icebo lokucoca ulwelo lweSwekile kunye neMolasses Umgquba
1. Ukuxhathisa okukhulu kwezifo kunye nokhula oluncinci:
Ngexesha lonyango lokucoca ulwelo lweswekile, iintsholongwane ziphindaphindeka ngokukhawuleza kwaye zivelise izixa ezikhulu zeyeza lokubulala iintsholongwane, iihomoni kunye nezinye izinto ezithile zemetabolites. Ukufaka isichumisi emhlabeni, kungathintela ukusasazeka kwamagciwane nokukhula kokhula, kuphucule izitshabalalisi kunye nokumelana nezifo. Udaka lokucoca olumanzi olungenanyango kulula ukudlula ibhaktiriya, imbewu yokhula kunye namaqanda kwizityalo kwaye zichaphazele ukukhula kwazo).
2.Ukusebenza kakuhle kwesichumisi:
Njengoko ixesha lokuvumba liintsuku ezi-7-15 kuphela, ligcina izondlo zodaka lokucoca ulwelo kangangoko kunokwenzeka. Ngenxa yokubola kwamagciwane, kuguqula izinto ekunzima ukuzifunxa kwizakhamzimba ezisebenzayo. Isichumisi esenziwe ngodongwe sesichumiso se-bioorganic singadlala ngokusebenza kwesichumisi ngokukhawuleza kwaye sizalise izondlo ezifunekayo ekukhuleni kwezityalo. Ke ngoko, ukusebenza kwesichumisi kugcina ixesha elide.
3. Ukulima ukutyeba komhlaba kunye nokuphucula umhlaba:
Sebenzisa isichumisi esinye seekhemikhali ixesha elide, izinto eziphilayo zomhlaba zityiwa ngokuthe chu, neziphumela kwinani lokuncitshiswa kweentsholongwane zomhlaba. Ngale ndlela, umxholo we-enzyme uyacutha kwaye i-colloidal yonakele, ibangele ukuxinana komhlaba, i-acidification kunye ne-salinization. Icebo lokucoca ulwelo lodaka luyakwazi ukudibanisa isanti, udongwe oluvulekileyo, ukuthintela amagciwane, ukubuyisela imeko-bume yomhlaba, ukuphucula ukungena komhlaba kunye nokuphucula amandla okugcina amanzi kunye nezondlo.
4. Ukuphucula imveliso kunye nomgangatho:
Emva kokufaka isichumiso semvelo, izityalo zineengcambu ezityaliweyo kunye neentsholongwane ezomeleleyo, ezikhuthaza ukuntshula kwezityalo, ukukhula, ukudubula, ukuchuma kunye nokuvuthwa. Iphucula kakhulu ukubonakala kunye nombala weemveliso zezolimo, inyusa inani leswekile kunye neziqhamo ezimnandi. Icebo lokucoca ulwelo lodaka lwe-bio-organic njengesiqhelo kunye nokunxiba okuphezulu. Ngexesha lokukhula, galela inani elincinci lesichumiso esingaphiliyo. Inokuhlangabezana neemfuno zokukhula kwesityalo kwaye ifikelele kwinjongo yokulawula nokusetyenziswa komhlaba.
5. Ukusetyenziswa ngokubanzi kwezolimo
Sebenzisa isichumiso esisisiseko kunye nokunxiba ngaphezulu ummoba, iibhanana, umthi weziqhamo, iivatala, imifuno, isityalo seti, iintyatyambo, iitapile, icuba, ifula, njl.